la butte ferey
Saint-Pierre-des-Ifs, Normandie, France
I-1h30 ukusuka eParis, i-1h ukusuka kwiilwandle ze-D.Day, i-40 min ukusuka e-Deauville nase-Honfleur. Yonwabela indlwana eqhelekileyo enabo bonke intuthuzelo efunekayo kunye negadi ethandekayo eyi-1000m² enazo zonke izixhobo ezibonelelweyo (ibarbecue, ijingi yabantwana).
Embindini weNormandy, 1h45 ukusuka eParis ngemoto (imoto) kunye nemizuzu engama-40 ukusuka elunxwemeni (iDeauville kunye neHonfleur), le ndlu yeeholide ikunika yonke intuthuzelo oya kuyidinga ukuze uchithe ixesha elimnandi nosapho lwakho okanye nabahlobo.
Ime embindini wegadi evaliweyo eyi-1,000 yesikweri seyadi, enefenitshala yegadi, i-barbecue kunye nojingi lwabantwana.
Yenzelwe abantu abayi-6/8, indlu ibandakanya:
Ngaphantsi : igumbi lokudlela, ikhitshi edibeneyo (i-oven, i-dishwasher, i-microwave, umatshini wokuhlamba, njl.), Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nebhedi ye-sofa yabantu aba-2, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Umgangatho ophezulu wamagumbi okulala ama-3 amakhulu : Igumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-2 zabantu abangabodwa kunye ne-1 enebhedi yabantu ababini kunye nebhedi elula.
Umgama oziikhilomitha ezimbalwa, ungakonwabela ukukhwela isikhephe emfuleni kwaye undwendwele "Le Bec Hellouin", i-abbey eyaziwayo.
Imizuzu eli-10 ngemoto kwaye uya kuba seSt Georges du Vièvre, apho unokufumana khona iivenkile zokutya, iofisi yabakhenkethi entle eneemephu zohambo oluninzi okanye lokukhwela ibhayisekile, idama lokuqubha kunye neziko lokukhwela ihashe.
Kukwakho nechibi elinesiseko solwandle (i-windsurfing) iimayile ezi-8 kude.
4.63 out of 5 stars from 94 reviews
4.63 · Izimvo eziyi-94
Indawo ezolileyo kakhulu kwindalo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Pierre-des-Ifs